कोरोना नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा प्रभावहीन – Sulsule
कोरोना नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा प्रभावहीन
एक जना सङ्क्रमितले तीन हजार व्यक्तिसम्म सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने
सुलसुले २०७७ भदौ १५ गते ०८:५८ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ लाई फैलिन नदिन भन्दै सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि उक्त अस्त्र प्रभावहीन देखिएको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यसपछि लकडाउन खुला गरियो । कोरोना नियन्त्रण हुनुको सट्टा बढ्न थालेपछि सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दियो ।
कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि साउनको अन्तिम सातादेखि नै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्लाभर र जिल्लाका केही भागमा निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या नियन्त्रण हुनुको सट्टा दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।
आइतबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् २४ घण्टामै एक हजार दुई सय २१ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूमध्ये तीन सय ४८ महिला र आठ सय ७३ पुरुष छन् । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा चार सय २९ कोरोनाका सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।
तीमध्ये काठमाडौंमा तीन सय ७२, ललितपुरमा १२ र भक्तपुरमा ४५ सङ्क्रमित देखिएको मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । यसअघि सबैभन्दा बढी देशभर एकै दिन एक हजार एक सय ११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि आइतबारको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हालसम्मकै बढी हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले आइतबार १२ हजार सात सय १७ जनामा पीसीआर परीक्षण भएकामा काठमाडौँसहित देशभर उक्त सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । हालसम्म छ लाख ८२ हजार तीन सय ४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन लगाएर खोल्दा, भारतबाट निर्बाध रुपमा मानिसको आवतजावत भएको कारण निषेधाज्ञा लगाए पनि संक्रमितको दर ह्वात्तै बढेको हो । एकपटक मानिस आउन दिइसकेपछि अब निषेधाज्ञा जति नै लगाए पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै जाने भएको कारण निषेधाज्ञा मात्र नियन्त्रणको उपाय होइन भन्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरुले सुरक्षित उपाए अपनाउन लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बाहिरबाट मानिस आउने कार्य बन्द गरेर निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने बताएको छ । भारतसँगको खुला सीमाको कारण नेपालमा जति नै निषेधाज्ञा लगाए पनि कोरोना नियन्त्रण हुन समस्या परेको हो ।
हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ हजार पाँच सय १८ रहेको छ । संस्थागत आइसोलेसनमा १० हजार छ सय १२ जना रहेका छन् । होम आइसोलेसनमा रहेकाको सङ्ख्या छ हजार ९ सय छ । आइतबार देशभर सात हजार सात सय ९७ जना क्वारेन्टिनमा छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा थप दुई सय ६७ कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । हालसम्म कोरोना जितेर घर फर्किनेको सङ्ख्या २० हजार आठ सय २२ पुगेको छ ।
कोरोनाका कारण आइतबार थप १४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा चार महिला र १० पुरुष छन् । मृत्यु भएका चार महिलामध्ये सुनसरीका ७४ वर्षीया, बाराका ४७ वर्षीया, महोत्तरीका ६२ वर्षीया र काठमाडौंका ७२ वर्षीया छन् । त्यसैगरी मृत्यु भएका पुरुषमध्ये सुनसरीका ६० वर्षीय, मोरङका ६२ वर्षीय, महोत्तरीका ७० वर्षीय र ३५ वर्षीय तथा रौतहटका ३० वर्षीय, ललितपुरका २९ वर्षीय, भक्तपुरका ६५ वर्षीय, नवलपरासीका ६२ वर्षीय तथा रूपन्देहीका ५७ वर्षीय र ६७ वर्षीय रहेका छन् । हालसम्म दुई सय २१ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निषेधाज्ञा लगाए पनि दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्न जाँदा जनस्तरमा त्राससमेत बढ्दै गएको छ । निषेधाज्ञाले सहरी क्षेत्रमा दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउनेहरु समस्यामा परेका छन् । धेरैले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को अहिले बढ्दो सङ्क्रमणका कारण नेपालीको स्वास्थ्य सेवा नै अप्ठ्यारोमा परेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दैनिक बढिरहेको सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सीमित साधन स्रोतले गर्नुपरेकाले अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्नुपरेको बताएका छन् । उनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट समाजलाई बचाउनु सबैको दायित्व रहेकाले सबैले यस कठिन परिस्थितिलाई बुझेर आआफ्नो तर्फबाट रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गर्न सकिने सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उनले सरकारले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म राम्रो सेवा प्रदान गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कतिपय बेलामा सङ्क्रमितको अपेक्षा पूरा नभएको बताए । एक जना सङ्क्रमित व्यक्तिले तीन हजार व्यक्तिसम्म सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने भएकाले सबैले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सङ्क्रमितको रिफर जथाभावी गरिएको पाइएकाले समन्वय गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले विभिन्न निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले सघन उपचार कक्षमा भएका बिरामी कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालमा रिफर गर्दा समन्वय नगरी रिफर गरिएकाले समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
‘कतिपय अस्पतालले बिरामी रिफर गर्दा कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालमा शय्या भए, नभएको एकीन नगरी त्यहाँका उपचार गर्ने टिमसँग समन्वय नगरी र स्वास्थ्यकर्मी पनि साथमा नपठाईकन त्यतिकै पठाइएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘यसरी समन्वय नगरी पठाइएका बिरामीको ज्यान तलमाथि पर्न गएर रिफर गर्ने अस्पताल नै जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ ।’ यस्तै मन्त्रालयले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था सम्बन्धित अस्पतालले गर्न निर्देशन दिएको राससले जनाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)